मकवानपुरको हाडीखोलामा जन्मिएकी रुपा कार्की अहिले नारायणी कलेज हेटौंडामा बीबीएस तेस्रो वर्ष अध्ययनरत छिन् । नारायणीबाटै दश जोड दुई उत्तिर्ण गरेकी रुपाले एसएलसी भने प्रगति उच्च मावि, हेटौंडा ९ बाट गरेकी हुन् । हाल हेटौंडा १, चाइनागेट निवासी २० वर्षिया रुपाले अञ्जन दाहालको ‘दूरी’, राज रानको ‘चाहिंदैन त्यो माया’, देवेन कार्कीको ‘तिमीले रोप्या फूल’ गीत, ‘कान्छी मायालु’ गीतको कभर भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन् । मोडलिङमा रुची भएकी यिनी अहिले सामसुङ कम्पनीमा कार्यरत छिन् । सामाजिक कार्य गर्न आफूलाई रुची भएको बताउँने रुपा हेटौंडामा आयोजित ‘मिस हेटौंडा २०१२ ’की सहभागी पनि हुन् । उनीसंग उनको जीवन भोगाई, अनुभूती लगायत विषयमा छोटो कुराकानी गरेका छौं ।
१.तपाईंको नाम रुपा, नामको अर्थ के हो नि ?
- मेरो विचारमा रुपा भनेको व्युटि हो, सिल्भर हो ।
२.आजभोली के गर्दै हुनुहुन्छ ?
-आजभोली जबमै व्यस्त छु, सामसुङ कम्पनिमा काम गर्छु ।
३.तपाईको भविष्यको सोच चाँही ?
-अहिलेको सोच भनेको बीबीएस् पूरा गर्ने हो, भविष्यमा सुपर मोडल र कलाकार बन्ने सोच छ ।
४.जीवन भनेको के हो जस्तो लाग्छ नि ?
-जीवन भनेको सङ्घर्ष हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
५.जीवनमा रुनु भएको छ कहिल्यै ?
-रोएकी छु, धेरै पटक ।
६.‘लभ’ भनेको के हो जस्तो लाग्छ ?
-लभ भनेको एक अर्कालाई बुझ्नु, केयर गर्नु हो जस्तो लाग्छ ।
७.कसैसंग लभ गर्नुभएको छ ?
-हा...हा...हा...लभ गरेकी छु नि । लभ नगर्ने को हुन्छ र ? लभ भनेको केटाकेटीसंग मात्र हुदैंन । लभ भनेको परिवार, साथीहरुसंग पनि हुन्छ ।
८.विवाह भनेको के हो तपाईंको विचारमा ?
-विवाह भनेको सामाजिक, पारिवारिक र व्यक्तिगत बन्धनमा बाँधिनु हो जस्तो लाग्छ ।
९.कस्तो जीवनसाथी होस् भन्ने चाहानुहुन्छ ?
-मलाई केयर गर्ने जीवनसाथी होस् भन्ने चाहाना छ ।
१०.मोडलिङ्प्रति मानिसले हेर्ने धारणाबारे तपाई के बुझ्नुहुन्छ ?
-हाम्रो समाजमा मोडलिङलाई त्यति राम्रो मानिदैन । तर पनि मोडलिङ् क्षेत्र नराम्रो होइन, हाम्रो सोचमा नै नराम्रो हो भन्ने लागेकाले मानिसले नराम्रो ठानेका छन् । मानिसमा विस्तारै यसप्रतिको धारणा सकारात्मक हुदैछ ।
‘आमा दुःखी देख्दा साह्रै पीडा हुन्छ ।’